လှတျလပျခှငျ့သညျ အခရာ – Federal Journal
ဩဂုတ် (၂၆) ရက်၊ ၂၀၂၁။
(၁) မြန်မာပြည်လွတ်လပ်ရေးဟာ လက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်နဲ့ နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ် (တနည်း) စေ့စပ်ညှိနှိုင်းရေး လမ်းစဉ် နှစ်မျိုးပေါင်းပြီး ရရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ လက်နက်ကိုင် လမ်းစဉ်နဲ့ နိုင်ငံရေး နည်း ပေါင်းပြီး တိုက်ရတဲ့ လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ လွတ်လပ်ရေးအတွက် တိုက်ရတဲ့ တိုက်ပွဲ တိုင်းသည်၊ တရားသေလမ်းစဉ် တစ်မျိုးတည်းနဲ့ သွားရတယ်လို့ မထင်ဘူး။ အခြေအနေနဲ့ အချိန်အခါ ကို လိုက်ပြီး သင့်တော်တဲ့ လမ်းစဉ်ကို သုံးရတာလို့ ယူဆနိုင်တယ်။ ကိုလိုနီလက်အောက်က လွတ်ဖို့ တိုက်ရတဲ့ လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲဟာ နိုင်ငံခြားအစိုးရကို ပြည်တွင်းက တိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ အခု လက်ရှိ အခြေအနေ ကတော့ ပြည်တွင်းက စစ်အာဏာရှင်ကို ပြည်တွင်းက လူထုက ပြန်လည်တိုက် ထုတ်ရတာဖြစ်တယ်။ ကိုယ့်နိုင်ငံတွင်းက စစ်အာဏာရှင်ကို နိုင်ငံရေးနည်း တစ်ခုတည်းနဲ့ တိုက်လို့ ရနိုင် ပါသလား။ အထွေထွေ အကျပ်အတည်းလမ်းစဉ်ကို ဖိတွန်းဖို့အတွက် နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်တစ်ခုတည်းနဲ့ မလုံလောက်ရင်၊ လက်နက်ကိုင် ဖိအားအထိပါ ပေးဖို့ လိုကောင်း လိုပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာ ထည့်သွင်း စဉ်းစားထားရမယ့်ကိစ္စ ဖြစ်ပါတယ်။
(၂) ဒီနေရာမှာ ဖက်ဒရယ်ရော၊ ဒီမိုကရေစီနဲ့ပါ အကြုံးဝင်တဲ့ အခြေခံအချက် (၂) ခု ရှိပါတယ်။ (၁) လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ (၂) ကိုယ့်ကြမ္မာ ကိုယ်ဖန်တီးခွင့် ဖြစ်ပါတယ်။ freedom and self-determination လို့ နားလည်လို့ ရပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီမှာ လွတ်လပ်ခွင့်က အခရာဖြစ်ပါတယ်။ လွတ်လပ်ခွင့်ဟာ အခြေခံ တန်ဖိုးဖြစ်ပါတယ်။ အခြေခံလွတ်လပ်ခွင့်မှ မရှိရင် ဘယ် တန်ဖိုး နှုန်းစံကိုမှ အသက်မဝင်နိုင်တော့ပါ။ လက်နက်နဲ့ အကြောက်တရားသာလျှင် နေရာတကာမှာ ကြီးစိုးလွှမ်းမိုးနေပါလိမ့်မယ်။ လွတ်လပ်ရေး အတွက် တိုက်ပွဲမှာ နိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ လက်နက်ကိုင်ဖိအားပေး နည်းဟာ အခြေအနေ အချိန်အခါအလိုက် ပြောင်းလဲ ကျင့်သုံးရမယ့်ကိစ္စလို့ ယူဆပါတယ်။
(၃) လွတ်လပ်ခွင့် မရှိရင် ကိုယ့်ကြမ္မာကိုယ် ဖန်တီးခွင့် မရှိနိုင်ဘူး။ ကိုယ့်ကြမ္မာကို ဖန်တီးခွင့် ရဖို့အတွက် လုံးဝ လွတ်လပ်ရေးဟာ အခရာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီကိုပဲ ကျင့်သုံး ကျင့်သုံး။ ဖက်ဒရယ်အထိပဲ သွားသွား။ လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ လွတ်လပ်မှုဟာ အရေးကြီးတဲ့ အခြေခံ လိုအပ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒီနေ့ လူထုကြွေးကြော်သံတွေနဲ့ လူထုဆန္ဒဖော်ထုတ်မှုတွေအားလုံးဟာ လွတ်လပ်ခွင့်အတွက် တိုက်ပွဲ ဝင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
လွတ်လပ်မှုအတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေတာ ဖြစ်တယ်။
ကြောက်ရွံမှုမှ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေတာဖြစ်တယ်။
(၄) အထွေထွေ လူထုသပိတ်နဲ့ အထွေထွေ အာဏာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှုအားလုံးဟာ ဒီမိုကရေစီ အခြေခံ အုတ်မြစ်ကို တည်ဆောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ အခြေခံအုတ်မြစ်ပြီးစီးတဲ့အခါမှာ ဖက်ဒရယ် အပေါ်ထပ် အဆောက်အအုံကို တည်ဆောက်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီနဲ့ ဖက်ဒရယ်အတွက် လွတ်လပ်ခွင့်ဟာ အခြေခံလိုအပ်ချက်ဖြစ်တယ်။ လူမှုဘဝလွတ်လပ်မှုဟာ လူထုရဲ့ လတ်တလော အကျိုးစီးပွားလည်းဖြစ်တယ်၊ ရေရှည်အကျိုးစီးပွားလည်းဖြစ်တယ်။ အမြဲတမ်းအကျိုးစီးပွားလည်းဖြစ် တယ်။
(၅) လွတ်လပ်မှုနဲ့ ကိုယ့်ကြမ္မာကိုယ်ဖန်တီးခွင့်အတွက် တိုက်ပွဲမှာ ဘာမဆို လိုအပ်လာမှာပဲ။ နိုင်ငံရေးလား။ လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲလား။ လွတ်လပ်မှုနဲ့ ကိုယ့်ကြမ္မာကိုယ် ဖန်တီးခွင့်အတွက်ဆိုရင် ဘယ်လမ်းစဉ်ကိုပဲ လျှောက်လျှောက် လျှောက်သင့်က လျှောက်ရမယ်။ လျှောက်လိုက လျှောက်ရမယ်။ လျှောက်မယ်ဆိုရင်လည်း ရေခံမြေခံက ရှိထားပြီးသားပါ။ ခုခံလူမျိုးစုလက်နက်ကိုင်တွေဟာ စစ်မှန်တဲ့ အခြေခံ ပြည်သူ့စစ် ရေခံမြေခံကောင်းဖြစ်ဖို့သာ ကြိုးပမ်းရမှာပါ…. ။
ဩဂုတျ (၂၆) ရကျ၊ ၂၀၂၁။
(၁) မွနျမာပွညျလှတျလပျရေးဟာ လကျနကျကိုငျလမျးစဉျနဲ့ နိုငျငံရေးလမျးစဉျ (တနညျး) စစေ့ပျညှိနှိုငျးရေး လမျးစဉျ နှဈမြိုးပေါငျးပွီး ရရှိလာခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ လကျနကျကိုငျ လမျးစဉျနဲ့ နိုငျငံရေး နညျး ပေါငျးပွီး တိုကျရတဲ့ လှတျလပျရေးတိုကျပှဲဖွဈပါတယျ။ လှတျလပျရေးအတှကျ တိုကျရတဲ့ တိုကျပှဲ တိုငျးသညျ၊ တရားသလေမျးစဉျ တဈမြိုးတညျးနဲ့ သှားရတယျလို့ မထငျဘူး။ အခွအေနနေဲ့ အခြိနျအခါ ကို လိုကျပွီး သငျ့တျောတဲ့ လမျးစဉျကို သုံးရတာလို့ ယူဆနိုငျတယျ။ ကိုလိုနီလကျအောကျက လှတျဖို့ တိုကျရတဲ့ လှတျလပျရေးတိုကျပှဲဟာ နိုငျငံခွားအစိုးရကို ပွညျတှငျးက တိုကျရတာဖွဈပါတယျ။ အခု လကျရှိ အခွအေနေ ကတော့ ပွညျတှငျးက စဈအာဏာရှငျကို ပွညျတှငျးက လူထုက ပွနျလညျတိုကျ ထုတျရတာဖွဈတယျ။ ကိုယျ့နိုငျငံတှငျးက စဈအာဏာရှငျကို နိုငျငံရေးနညျး တဈခုတညျးနဲ့ တိုကျလို့ ရနိုငျ ပါသလား။ အထှထှေေ အကပျြအတညျးလမျးစဉျကို ဖိတှနျးဖို့အတှကျ နိုငျငံရေးလမျးစဉျတဈခုတညျးနဲ့ မလုံလောကျရငျ၊ လကျနကျကိုငျ ဖိအားအထိပါ ပေးဖို့ လိုကောငျး လိုပါလိမျ့မယျ။ ဒါဟာ ထညျ့သှငျး စဉျးစားထားရမယျ့ကိစ်စ ဖွဈပါတယျ။
(၂) ဒီနရောမှာ ဖကျဒရယျရော၊ ဒီမိုကရစေီနဲ့ပါ အကွုံးဝငျတဲ့ အခွခေံအခကျြ (၂) ခု ရှိပါတယျ။ (၁) လှတျလပျခှငျ့နဲ့ (၂) ကိုယျ့ကွမ်မာ ကိုယျဖနျတီးခှငျ့ ဖွဈပါတယျ။ freedom and self-determination လို့ နားလညျလို့ ရပါတယျ။ ဒီမိုကရစေီမှာ လှတျလပျခှငျ့က အခရာဖွဈပါတယျ။ လှတျလပျခှငျ့ဟာ အခွခေံ တနျဖိုးဖွဈပါတယျ။ အခွခေံလှတျလပျခှငျ့မှ မရှိရငျ ဘယျ တနျဖိုး နှုနျးစံကိုမှ အသကျမဝငျနိုငျတော့ပါ။ လကျနကျနဲ့ အကွောကျတရားသာလြှငျ နရောတကာမှာ ကွီးစိုးလှမျးမိုးနပေါလိမျ့မယျ။ လှတျလပျရေး အတှကျ တိုကျပှဲမှာ နိုငျငံရေးနညျးနဲ့ လကျနကျကိုငျဖိအားပေး နညျးဟာ အခွအေနေ အခြိနျအခါအလိုကျ ပွောငျးလဲ ကငျြ့သုံးရမယျ့ကိစ်စလို့ ယူဆပါတယျ။
(၃) လှတျလပျခှငျ့ မရှိရငျ ကိုယျ့ကွမ်မာကိုယျ ဖနျတီးခှငျ့ မရှိနိုငျဘူး။ ကိုယျ့ကွမ်မာကို ဖနျတီးခှငျ့ ရဖို့အတှကျ လုံးဝ လှတျလပျရေးဟာ အခရာဖွဈပါတယျ။ ဒီမိုကရစေီကိုပဲ ကငျြ့သုံး ကငျြ့သုံး။ ဖကျဒရယျအထိပဲ သှားသှား။ လှတျလပျခှငျ့နဲ့ လှတျလပျမှုဟာ အရေးကွီးတဲ့ အခွခေံ လိုအပျခကျြဖွဈပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ဒီနေ့ လူထုကွှေးကွျောသံတှနေဲ့ လူထုဆန်ဒဖျောထုတျမှုတှအေားလုံးဟာ လှတျလပျခှငျ့အတှကျ တိုကျပှဲ ဝငျနခွေငျးဖွဈပါတယျ။
လှတျလပျမှုအတှကျ တိုကျပှဲဝငျနတော ဖွဈတယျ။
ကွောကျရှံမှုမှ လှတျမွောကျရေးအတှကျ တိုကျပှဲဝငျနတောဖွဈတယျ။
(၄) အထှထှေေ လူထုသပိတျနဲ့ အထှထှေေ အာဏာဖီဆနျရေးလှုပျရှားမှုအားလုံးဟာ ဒီမိုကရစေီ အခွခေံ အုတျမွဈကို တညျဆောကျနတောဖွဈပါတယျ။ အခွခေံအုတျမွဈပွီးစီးတဲ့အခါမှာ ဖကျဒရယျ အပျေါထပျ အဆောကျအအုံကို တညျဆောကျဖို့အတှကျဖွဈပါတယျ။ ဒီမိုကရစေီနဲ့ ဖကျဒရယျအတှကျ လှတျလပျခှငျ့ဟာ အခွခေံလိုအပျခကျြဖွဈတယျ။ လူမှုဘဝလှတျလပျမှုဟာ လူထုရဲ့ လတျတလော အကြိုးစီးပှားလညျးဖွဈတယျ၊ ရရှေညျအကြိုးစီးပှားလညျးဖွဈတယျ။ အမွဲတမျးအကြိုးစီးပှားလညျးဖွဈ တယျ။
(၅) လှတျလပျမှုနဲ့ ကိုယျ့ကွမ်မာကိုယျဖနျတီးခှငျ့အတှကျ တိုကျပှဲမှာ ဘာမဆို လိုအပျလာမှာပဲ။ နိုငျငံရေးလား။ လကျနကျကိုငျတိုကျပှဲလား။ လှတျလပျမှုနဲ့ ကိုယျ့ကွမ်မာကိုယျ ဖနျတီးခှငျ့အတှကျဆိုရငျ ဘယျလမျးစဉျကိုပဲ လြှောကျလြှောကျ လြှောကျသငျ့က လြှောကျရမယျ။ လြှောကျလိုက လြှောကျရမယျ။ လြှောကျမယျဆိုရငျလညျး ရခေံမွခေံက ရှိထားပွီးသားပါ။ ခုခံလူမြိုးစုလကျနကျကိုငျတှဟော စဈမှနျတဲ့ အခွခေံ ပွညျသူ့စဈ ရခေံမွခေံကောငျးဖွဈဖို့သာ ကွိုးပမျးရမှာပါ…. ။